Semalt Pamhando Yezvakakosha Inobatsira Mukusimudzira SEO Rankings
Vatengesi vepaIndaneti vanonzwisisa kukosha kwekuchengetedza mawebsite anotarisa uye anotaridzika kutsva paanenge achiedza kubvumirana nevanogona kutenga. Nzira yakanakisisa yekuita nayo iyi ndeyokuvimbisa kuti webhusaiti yako ine zvitsva uye zvitsva. Nzira iyi haisi kungochengetedza webhuta yehutara asi inowedzerawo webhusaiti yacho yakakwirira kusvika kuOO rankings.
Kunyange zvakadaro, pachena kana kuti pane kunyora zvinyoronyoro uye kuisa zvinyorwa zvekugadzirisa zvichaita kuti urege kuenda kune imwe nzvimbo. Kana uchida uchapupu hwechokwadi ichi, saka taura nevanodzidzisa SEO uye webhutungamiri. Webhu yakagadzirirwa SEO zvinangwa zvinofanira kuve zvakarongeka uye zvisina chaipo. Kutaura zvazviri, tisati tagara mu SEO zvakakanganiswa , munhu anofanira kubvunza pamusoro pemhando yehupenyu huripo. Apo SEO maitiro ainge ari matsva, uye mitsva yekutsvaga yakanga isiri yakachenjera sezvairi nhasi, mamwe mavara mashoma kana blog yakatumirwa pane webhupu yekutengesa inogona kusimbisa zvakanyanya nzvimbo dzako. Zvinosuruvarisa, mazuva iwayo apera, uye SEO yakagadzirwa yakakura ikava iyo yose yekushambadzira. Muchikamu chino, Andrew Dyhan, we Semalt nyanzvi, anopa ruzivo rwakadzika pamusoro pemhando uye kushandiswa kweSOO zvakagadzirwa. Dzinosanganisira:
Vhidhiyo - Vanotaura kuti vanogutsikana ndeyeMambo.Zvino, mavhidhiyo ari mambo.Vashandisi vepaIndaneti vanozviwana zvakanyanya kuverenga mablog uye ndima yakareba yemashoko.Zvino kuputsa dambudziko iri, ruzivo rwemawebsite rwakashandurwa kuva mavhidhiyo akazara.Mavhidhiyo aya, vatengesi vanoshandisa unyanzvi hwavo kurondedzera nekuratidzira zvinhu zvavo nemashandi.Tsika iyi yakatove yakagadzirirwa kupinda kugadziriswa kwemavhidhiyo mavhidhiyo anenge aripo apo munhu mutengesi kana mutengesi anenge achizvibvunza pamibvunzo yakasimudzwa kubva kune vateereri paIndaneti Mavhidhiyo anozivikanwa nhasi nokuti vakawanda vashandisi vanopedza nguva yakawanda yenguva yavo paIndaneti uye sekutarisa firimu, vhidhiyo yekutengesa yakafanana inofadza uye inotora.
Infographics - Ichi chave chiri chinhu chakakosha kunyange mumazuva ekutengeserana kwetsika. Mifananidzo uye zvinyorwa zvemashoko zvakanyatsogadzirirwa uye zvakarongedzwa nenzira inofamba-famba uye inoendesa pfungwa kana pfungwa iri pedo kumusika unotarisirwa kunze kwekudiwa kwekuwedzerwa kutsanangurwa kubva kune mumwe munhu. Infographics inotenderera pamusorosoro hwekugadzira kubudirira; saka inoda rubatsiro rweboka rakagadzira tarenda. Kwete kuti uzvidye mwoyo, pane zvakawanda zve infographic kugadzira zvishandiso zvekushandisa panzvimbo yekukubatsira. Zvishandiso izvi zvinokurumidza uye zvakarurama. Kungova nehanya ne infographic ndeyekuti injini dzekutsvaga dzichiri kuverenga kana kuverenga kuburikidza nemifananidzo uye unoda kuwedzera maTags mufananidzo kuitira kuti inogona kutorwa sezvinogadzirwa nevanjini.
Guest Blogs - Hungu, mabhuku evanhu vanogara vachikosha uye anobatsira. Kanganwa muenzi wakaipa kuburitsa maitiro akawana SEO mukurumbira wakaipa. Kare kumashure, vanhu vaifunga kuti vanogona kunyengedza nzira kuburikidza nekuita spamming content kuti vawedzere kumashure. Nhasi, vatambi vemazamu vanofanira kunge vane zvinyorwa, zvakakosha uye zvine zvigaro izvo vashandi vanoona zvakakosha. Bhuku rimwe nerimwe rinofanira kunge rine simba rehurukuro yakanyatsotsvakurudzwa kuitira kuti kana vashandisi vagozvigovana paIndaneti, zvinowedzera kufarira uye webhusaiti yehupenyu .